Lammii lammii nyaatu Oromiyaan hin baattu! – Welcome to bilisummaa
Lammii lammii nyaatu Oromiyaan hin baattu!
Nama Barbaadamaa jiru….‪#‎share‬
Namni suuraa irratti argitan kun I/A waajira komunikashiinii (communication) Magaalaa Masalaa yoo ta’u FXG ummata magaalaa Masalaatiin gaaggeeffame irratti Dargaggoo‪#‎Abbaas‬ Abdulrahaman jedhamu hojjataa Waajira Tajaajila Bishaanii kan ta’e rasaasaan rukkutuun kan ajjeese! Lammii lammii nyaatu Oromiyaan hin baattu! Bakka argametti tarkaanfiin irratti haa fudhatamu!
Previous ‪#‎OromoProtests‬ TPLF’s soldiers running through Darimu town ( Ilu Ababor)
Next Buufatni Xayyaara Itiyoophiyaa (Ethiopianairline) ummata Oromoo bal’aa irratti Loogii hammana hinjedhamne hojjataa jira.